Omunye omusha ukuzijabulisa izindawo ohlobo umndeni, okuyinto uyaziqhenya we dolobha Tatarstan, kuyinto aquarium. Kazan kungabhekwa njengophawu idolobha elingasolwandle labantu ungaya kuphi diving. Nokho, ngo-2015, abantu abahlala kulo kanye izivakashi kungaba sengathi wabahloli kolwandle ejulile futhi ukuhlangabezana izakhamuzi zakhona, uya isakhiwo amanzi ipaki "Baryonyx" sise ul. Gafuri 46.
Oceanarium (Kazan): Incazelo
Into yokuqala ukuthi izivakashi ukubona, iwe esitezi sokuqala i aquapark "Baryonyx" ukuthi - ukufakwa egqamile olwandle. Ngokulandelayo, izivakashi ukudlula ngqo endaweni aquarium ngokusebenzisa emihlathini toothy senhlanzi enkulu, bese bengena ehholo, lapho bahlangana by izithombe ezintathu-ntathu of cartoon abalingiswa - Spongebob nabangani bakhe.
Izivakashi bakwazi ukujwayela isimo futhi ukulungiselela uhambo kusuka Kazan kuzo izintwa ocean, yezindawo zokuqala ahlotshiswe ngendlela ungafunga uthi ziyindawo namathafa loMfula iVolga ezingomakhelwane edolobheni. Kukhona ungabona amachibi Sturgeon, buthule elintantayo kunto yakhe. Ngaphezu kwalokho, izivakashi egumbini nge imitha-50 aquarium okusezingeni eliphezulu, okuyinto kuhlale colorful inhlanzi yasendaweni eshisayo, futhi phakathi kuyinto aviary elikhulu nge penguins. Lezi Waterfowl ezibhekwa ukuziqhenya aquarium, kanye kokuvela eplanethini yethu iminyaka engaphezu kwamashumi amane kwezigidi ezingu edlule izimfudu svinonosye ezingavamile.
Lake, ushaka, uphawu
Maphakathi aquarium kuyinto lounge lapho izivakashi kungaba ukudoba futhi aphe izinhlanzi. It lihlotshiswe ufana nechibi, sizungezwe imithi eluhlaza, ezikhulayo phakathi ziqhingi, ungakwazi ukuhamba usebenzisa catwalk. Ngokulandelayo, izivakashi abeza aquarium e Kazan (izithombe zale ukusungulwa esanda ehlotshiswe umuzi wonke izivakashi prospectuses) udabula Umhubhe ingilazi nge izimfudu giant oshaka futhi. Futhi, bayohamba emhlabeni ikamelo, lapho stingrays baphile. Ngaphezu kwalokho, izivakashi bayamenywa ukuba balungise ecacile ingilazi phansi futhi aphathe yamabhola antantayo acekelwa phansi izilwane. Phakathi kwezilwane ezingavamile ukuthi kungabonakala epaki amanzi Kazan, kungenziwa ngokuthi i uphawu noboya semenova, wamenza inhlekisa phambi kwezinye izivakashi zakhe stunts ukuthi kungaba yinoma yimuphi Uhlelo esekisini.
Mhlawumbe, kunzima ukuthola umuntu bangambiza lovely izidalwa izingwenya. Nokho, kukhona izinto ezimbalwa, futhi labo kholwa awayona azinake. Ukuzijwayelanisa izakhamuzi Kazan izingwenya eduze, abagqugquzeli oceanarium ezithathwe okuwenza aqondane ihholo-terrarium nge ingilazi Maze zezingane of ezisindayo-duty ingilazi. Izingane zakho uzokwazi ukuba balungise ebiyelwe ngokujulile izingwenya kanye ukugcina ukuziphatha kwabo, ngokuba nobude bengalo. Yiqiniso, izivakashi bakhononda ngokuthi esikhathini esiningi lezi zilwane nolaka futhi ngobuqili ukuchitha, esibonisa ukubaza itshe, futhi bamatasa kuphela okwamanje yokudla.
Oceanarium (Kazan, ul. Mazitov Gafuri, d. 46), ungavakashela yimuphi usuku lwesonto ngaphandle ngoMsombuluko, uma kukhona, njengoba eminyuziyamu eziningi edolobheni, okukhiphayo. Ivula amahora - kusukela ngo 10:00 kuya 21:00. Ikakhulukazi eziningi izivakashi kuyinto ngoMgqibelo nangeSonto, ngakho uma kungenzeka, Kazan aquarium kungcono ukuvakashela phakathi nesonto, ngoba ngalezo zinsuku wena ungagxambukeli ngomoya ophansi ukubukela izilwane futhi ukuthatha izithombe zazo ku isithombe kanye video amakhamera (khumbula ukusebenzisa flash uma ngokudubula nqatshelwe dla).
Ibhokisi ihhovisi aquarium ezinsukwini lapho wavula umphakathi, ivulekile kuze 20:00. Ticket izintengo zincike engu-isivakashi. Ngokwesibonelo, izingane ezingaphansi kweminyaka engu-3 ubudala ephelezelwa omunye kubantu abadala angaya khona mahhala, kodwa uma sebekhulile, kodwa abazange kodwa waphenduka 12, kufanele bekhokha khona imali yokubhalisa ruble 500. Ngokuqondene omdala, izindleko salo ruble 700. Ungase futhi ithikithi ukuvakashela aquarium, intengo zazo kuncike ubude yinkathi ofuna ukufinyelela ukhululekile insimu yalo. Izindleko yokwemukela isikhathi unyaka 1 ruble 2900. abadala futhi ruble 1900. izingane, kanye nengxenye ngonyaka - 1900 futhi 1400 ruble. ngokulandelana.
Oceanarium e Kazan: kanjani lapho
Lapho ulwazi mayelana kuvulwa inhlokodolobha Tatarstan entsha ukuzijabulisa indawo, lapho ungabona abakhileyo ekujuleni kolwandle, wangena ukuphrinta, abaningi babexakekile mayelana kukhethwa indawo. Iqiniso lokuthi komakhelwane lapho likhona akuyona elula kunazo ngokuya ukufinyeleleka ezokuthutha kuleli dolobha (Kazan). Oceanarium (Gafuri, 46) Kungaba entula izivakashi, kodwa kwaba isinqumo esifanele ukusebenzisa free Shuttle ethuthela wonke umuntu ukuya khona kusukela metro station "Tukai". Ngakho, mayelana nokuya kulesi sakhiwo amanzi ipaki "Baryonyx" akukho nobunzima.
Kusukela kuvulwa Kazan oceanarium ngesikhashana nje. Nokho, esiwavakashele ezinkulungwane zabantu yaseTatarstan. Futhi lokhu akumangalisi, njengoba Oceanarium (Kazan), okuyinto libuyekeza ingxenye ezikhuthaza kakhulu, iyona omude kunayo yonke eYurophu. Ngaphezu kwalokho, kuyinto kuphela iVolga esifundeni, Ngakho-ke, bheka izakhamuzi zakhona zivela ezifundeni elingumakhelwane republic. Ngo umusa zokuvakashela aquarium Iye yaba khona yizivakashi futhi izakhamuzi izizathu ezilandelayo:
kakhulu umsebenzi Abahlobisi abaye ekhishwe amahholo;
ukusizakala mahhala Shuttle, eletha izivakashi aquarium kusuka esiteshini esiseduze komhlaba;
ezihlukahlukene zasolwandle ukuphila kungabonwa khona.
Njengoba for izici ezingezinhle, le ethile eyinhloko aquarium, nahlulele by ukubuyekezwa, kuyinto izindleko eliphezulu amathikithi.
Uma enhlokodolobha yase Tatarstan, qiniseka ukuthi uvakashela aquarium wendawo. Kazan - kwedolobha lapho izivakashi ngeke kusadingeka ukuba sizwe be bored. Nokho, ngemva kuvulwa izivakashi of palette into emzaneni kungenye umbala yengeziwe.
Autotrophs - kukhona eziphilayo ezingaba synthesize ndaba yabo organic
Umbuzo omama kanye obaba: "Lapho ingane iqala ukumamatheka?"
Bear Lake (Novosibirsk): incazelo, izimo ukungcebeleka abahambi Izibuyekezo
Ukulungiswa. Izinhlobo ukulungisa. Izinhlobo ukulungisa lobuchwepheshe
Kusho ukuthini ukuphupha ukubhula? Dream Ukuhunyushwa: Ukuqagela engalweni. Incazelo incazelo yaleli phupho